နေအိမ် ဖုန်းကို Hack တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းကိုသူတို့ရဲ့နံပါတ်နဲ့ပဲဘယ်လို hack မလဲ
တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းကိုသူတို့ရဲ့နံပါတ်နဲ့ပဲဘယ်လို hack မလဲ
သင်ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည် ဖုန်းပုံရိပ်များကိုဘယ်လို Hack မလဲ
အမြစ်သို့မဟုတ် Jailbreak မလိုအပ်ပါ
Ada beberapa keuntungan lain menggunakan Minspy untuk meretas ponsel. Hal terbaik dari semuanya adalah Anda dapat melihat bagaimana Minspy akan terlihat beraksi melalui file web အခမဲ့သရုပ်ပြတိုက်ရိုက်.
Saat Anda ingin meretas iPhone, Anda tidak perlu mengakses ponsel mereka sekali pun untuk melacaknya. Ini karena desain inovatif IOS ကို Minspy ဖြေရှင်းချက်.
လျှောက်လွှာအရွယ်အစား Android အတွက် Minspy hanya sekitar beberapa MB. Artinya, hanya perlu beberapa detik untuk memasang aplikasi. Setelah diinstal, ikon aplikasi akan hilang dari menu aplikasi ponsel target.
အဆင့် ၁: Minspy အကောင့်တစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ dan dapatkan paket berlangganan berdasarkan perangkat target- Android atau iOS.
အဆင့် ၂: a.) Jika Anda ingin meretas perangkat Android, unduh dan instal aplikasi Minspy di dalamnya dari tautan yang akan Anda lihat setelah mendaftar. Seperti yang disebutkan sebelumnya, aplikasi akan disembunyikan sepenuhnya.
အဆင့် ၃: Klik ‘Start’ dan penginstalan akan selesai. Anda kemudian akan dibawa ke dashboard Anda.
ယခင်ဆောင်းပါးဖုန်းကိုဘယ်လို Hack မလဲ